UKUDALA ISIKHOKELO SEGARAJI ESINCINCI - IIGARAJI
Eyona Iigaraji Ukudala isikhokelo seGaraji esincinci
Ukudala isikhokelo seGaraji esincinci
Nantsi eyethu isikhokelo segaraji esincinci kubandakanya umbutho, ukugcinwa, ukucoca, uyilo kunye neengcebiso zoyilo. Njengoko utsala kwigaraji, ukukhanya kuyakhanya. Imfumba efumeneyo yezixhobo ezingasetyenziswanga, iithoyi ezindala, iimpahla zobusika kunye naloo mhlobiso wotshani walusongo woyikisa ukubhukuqwa nangaliphi na ixesha. Ngokukhawuleza, uyawuvala umnyango wegaraji ngaphambi kokuba nawuphi na ummelwane odlulayo abambe umbono wehlazo lakho eliyimfihlo.
Isandi esiqhelekileyo? AWUKHO wedwa. Sinotyekelo lokuphatha igaraji ngokungathi yeyona drowa inkulu yendlu endlwini. Awazi ukuba uyibeka phi iTV yakudala? Yizise egaraji. Awulungelanga ukwahlukana nengqokelela yamaalbham eediliya? Zibambelele kwigaraji.
Kungekudala, igaraji yakho igcwele kangangokuba awunakukhumbula nokuba yintoni apho, kokukhona ungafumani into oyifunayo. Ngamanye amaxesha, igaraji igcwele kakhulu, uphela upaka kwindawo yokuqhuba okanye esitratweni.
Ukuba ulungele ukudambisa isiphithiphithi, hlala ufunda ukuze ufumane iingcebiso ngendlela yokusebenzisa umbutho omncinci kwaye ubuyisele igaraji yakho kwindawo esebenzayo.
Umbutho weGaraji encinci
Iingcebiso zokuCoca iGaraji ukuze unciphise
Izinto zokucoca iGaraji
Uluhlu lweeNkonzo zokuCoca iGaraji
Ukuhlela izinto kwigaraji
Ubeko lweGaraji encinci
Iingcebiso zoyilo lweGaraji encinci
Imibono yokuGcina encinci yeGaraji
Kutheni kufuneka wenze iGaraji encinci
Xa ukungcola okugqithileyo kubangela uxinzelelo, ubuncinci yimpendulo. Ukufaka isicelo 'kokuncinci kuninzi' ifilosofi encinci kwigaraji yakho kukunyanzela ukuba ucinge ngento ebaluleke kakhulu kuwe.
Xa ubeka phambili izinto ozixabise kakhulu, ubomi buba lula kwaye bumnandi ngakumbi. Ngexesha elizayo xa ufuna ukunyamekela ingca yakho okanye uqalise iprojekthi yophuculo lwasekhaya, uya kwazi kakuhle ukuba yonke into ikuphi.
Njengefilosofi yobomi, ubuncinci bumalunga nokwenza lula kunye nokwenza lula. Izinto ezimbalwa akufuneki zithethe umgangatho ophantsi wobomi.
Nxibelelana nesizathu sakho sokufuna igaraji encinci. Khawufane ucinge indlela oza kuziva ukhululeke ngayo xa iprojekthi igqityiwe.
utshintsha njani igama lakho xa utshatile
Emva koko thatha yonke into egaraji yakho. Ewe, yonke into. Khetha usuku olushushu kwaye uqale ukutsala. Sukuzibandakanya ekwenzeni izigqibo okwangoku, zikhuphe zonke. Eli nqanaba leprojekthi limalunga nokulungisa isiphithiphithi esiqokeleleneyo kwaye sikunike indawo engenanto.
Izinto ezifakwe kwingca yakho okanye kwigumbi lakho lokuhlala ngoku azinakhaya. Abanye babo baya kubuyela kwigaraji, kodwa abanye baya kufumana iindawo ezintsha zokuhlala ngaphakathi kwindlu yakho. Uninzi lwazo luya kunikelwa okanye lulahlwe.
Xa yonke into iphumile (kubandakanya ukugcinwa okususwayo) lixesha lokucoca.
Qala ngeekona eziphezulu zegaraji, apho izinambuzane kunye nothuli zihlala ziqokelela. Unokufuna ukunika imaski yothuli, kuba igaraji yakho ngekhe icocwe nzulu.
Vuthulula iindonga uze uzicoce ngamanzi ashushu anesepha kunye nesiponji esithambileyo. Ukuba ufuna ukupeyinta okanye ukuhombisa iindonga, ngoku lixesha lokwenza njalo. Cinga ngepeyinti engwevu imibala ebumnyameni embalwa kunomgangatho wakho yoyilo olunobunkunkqele be-monochrome.
Sebenzisa umtshayelo otyhalayo oqinileyo ukuze utshayele umgangatho ucoceke. Ukuba kukho amabala amatsha aneoyile phantsi, unokuntywila ulwelo olungaphezulu ngokusasaza inkunkuma yekiti ngaphezulu kwebala.
Nangona kunjalo, ioyile kunye negrisi zingena kwikhonkrithi engatywinwanga, kungafuneka wenze into ecocekileyo enzulu. Iimveliso ezisekwe kwiperoxide zi-eco-friendly kwaye ziyasebenza ekulweni igrisi kunye neoyile.
Olunye ukhetho lokucoca umgangatho wakho lubandakanya i-trisodium phosphate (TSP) kunye ne-muriatic acid. I-TSP iyakugcina ikhonkrithi, kodwa xa ingena emhlabeni, iziphumo ezantsi ziyintlekele kwizilwanyana zasendle zalapha. Ngaphandle kokuba igaraji yakho ine-drain, awukwazi ukuyicoca ngokufanelekileyo nge-TSP.
I-Muriatic acid ayinyibiliki kuphela igrisi kunye neoyile, kodwa kunye nesibopheleli kwikhonkrithi yakho. Oku kunokushiya igaraji yakho yothuli kunokuba wawusele uqalile njengoko i-asidi ikhupha i-calcium hayidroksayidi kwaye inxibe umgangatho ngothuli olunombala omhlophe.
Sebenzisa iwasha yamandla kuya kuphucula ukubonakala komgangatho wakho, kwaye yeyona ndlela ilungileyo yokulungiselela ukusetyenziswa kwesitywina.
Ukusebenzisa i-high-gloss sealant phezu komgangatho wakho wekhonkrithi kukukhuthaza ukuba ubone igaraji njengegumbi eligqityiweyo eliyinxalenye yendlu yakho kunokuba unamathele kuyo.
Umtshayelo otyhidiweyo oqinileyo I-Degreaser kunye ne-muriatic acid yokucoca amabala eoyile
Isicoci sesandla, iziponji, iitawuli zevenkile I-Power washer yokucoca imigangatho
Ipeyinti, itreyi kunye neebrashi Isitywina sokuhombisa okuphezulu somgangatho wekhonkrithi
Isepha, ukukopa kunye neebhakethi Iimaski zothuli
Ngoku igaraji icocekile, ukulungele ukuqala ukuhlela izinto zakho. Njengoko uthatha into nganye, zibuze le mibuzo.
‘Ngaba ndifuna ukuyigcina le nto?’ Ukuba impendulo nguhayi, yiphose enkunkumeni ngoku, okanye uyibeke emotweni enokunikelwa ngayo. Ukuba awuqinisekanga, sukuchitha ixesha elininzi uxoxa - yibeke kwicala elinye. Siza kubuya kwezi zinto kamva. Ukuba ufuna ukugcina le nto, zibuze umbuzo olandelayo.
‘Ngaba le nto isegaraji?’ Kwakhona, ukuba impendulo nguhayi, yisa loo nto kwindawo leyo. Ukuba awuqinisekanga, yibeke ecaleni.
ubungakanani begaraji yemoto ephindwe kabini
Xa ubuzile le mibuzo yayo yonke into egaraji, ushiyeke nezinto ofuna ukuzigcina, ezikwegaraji yakho, kunye nezinye izinto ongaqinisekanga ngazo.
Ukufumanisa ukuba ungagcina yonke into oyifunayo, kuya kufuneka ufumane ukuba yeyiphi indawo yokugcina onayo.
Paka imoto yakho kwigaraji engenanto kwaye ulinganise ii-intshi ezingama-36 macala omabini. Sebenzisa iteyiphu yegaffer enemibala ukuphawula indawo phantsi. Esi sithuba singcwele - akukho nto inokugcinwa ngaphakathi kwimigca.
Emva koko, phawula indlela ebanzi engama-intshi engama-36 ukusuka kwimoto ukuya emnyango. Nokuba konke okwaziyo ukuyenza kukugcina le mimandla icacile, amava akho egaraji aya kuphuculwa ngokubonakalayo njengoko ukwazi ukuhamba ukusuka emotweni ukuya endlwini ngaphandle kokubangela i-avalanche.
Ndwendwela eli phepha ukufumana okungakumbi malunga ubungakanani begaraji eziqhelekileyo .
Ngoku ulungele ukuqala ukubeka izinto kwakhona kwaye uzilungiselele. Ubuncinci buthatha ukugwetywa-kuyakufuneka ucoca ngokungenalusini izinto ezingaphezulu kokuba ushiyeke kuphela ngento eyimfuneko nesebenzayo. Kukho iindlela ezimbalwa zoyilo eziza kwamkelwa ezinokunceda ukunciphisa inkqubo.
● Ukuba ingena kwishelufa, ayivumelekanga phantsi . Zama ukugcina umgangatho ucacile ngokusemandleni, kwaye ukunqande ukuwuphatha njengeshelfu eyongezelelweyo. Imitshini yokulawula ingca, iikiriva, kunye nezinye izinto ezinkulu azinako ukuya ezishelifini, ke kuyakufuneka wabele indawo yomgangatho wabo.
● Akukho ingqokelela okanye ingxinano . Kuya kufuneka ukwazi ukuyibona ngokucacileyo into nganye ezishelfini zakho okanye kwikhabhinethi. Akukho nto mayichukumise nayiphi na enye into. Kuya kufuneka ukwazi ukukhupha okanye ukufikelela kuyo nayiphi na ibhokisi okanye isikhongozeli ngaphandle kokuhambisa into ngaphezulu kwayo.
● Ukubeka phambili izinto kunye nokusetyenziswa okuninzi . Ngeke ukwazi ukugcina yonke into. Xa igaraji yakho igcwele izinto eziluncedo kodwa ezingasetyenziswanga, unquma njani ukuba yeyiphi oyigcinayo?
Yonke into kwigaraji yakho encinci kufuneka ihlambuluke kwaye ikwimeko entle yokusebenza. Into nganye kufuneka ibe yinto ekuzisela uvuyo ukuyisebenzisa okanye ibenze ubomi bakho bube ngcono ngandlela thile. Ukuba ifezekisa umsebenzi ongaphezulu kwesinye, nokuba ungcono.
● Cwangcisa igaraji yakho ngesoftware yoyilo . Kukho uluhlu lwe Isoftware yoyilo lwegaraji iinkqubo ezinokukunceda ucwangcise ubeko lwakho. Ungangena kwisithuba segaraji yakho kwaye uzame ukubeka ikhabethe eyahlukeneyo kunye nezinto zokugcina ukuze ubone ukuba loluphi uhlobo lomsebenzi kwindawo yakho.
Enye indlela yokugcina uziva umncinci kwigaraji yakho kukusebenzisa indawo ethe nkqo. I-Pegboard ifakwe ngamagwegwe kwaye yafakwa eludongeni yindlela entle yokufumana izixhobo zakho phantsi kwaye ugcine izinto zilungelelaniswe ngokubonakalayo.
usuku olumnandi lwanqwenela abahlobo
Ukuvulwa kweshelfu kunokukhawuleza ukugcwala kwaye kutshabalalise uyilo lwakho oluncinci, ke ukuba uza kuyisebenzisa, qiniseka ukuba into nganye inesithuba sayo, kwaye ubuncinci zii-intshi ezimbini ukusuka kumda weshelufu.
Iikhabhathi lolunye ukhetho lokugcina izinto zakho zingajongwa kunye nokugcina iprofayili ehlaziyiweyo. Lumka ungasebenzisi ucango oluvaliweyo njengesizathu sokungqubana. Cinga ukusebenzisa umenzi weelebheli ukucacisa ngokucacileyo indawo enikezelwe kwinto nganye.
Ukuba usebenzisa igaraji yakho yokugcina, tyala imali kwizikhongozeli ezihambelana kakuhle. Yenza uluhlu lwayo yonke into engaphakathi kwesikhongozeli, kwaye ucofe ikopi yoluhlu phezulu nasecaleni. Shiya indawo ejikeleze ibhokisi nganye yokugcina kunokuba ubanyanzele ngokudibeneyo.
Ukuba igaraji yakho emdaka ayikukhathazi, ke ixesha lakho lingcono lichithwe kwenye indawo. Akukho nto iphosakeleyo ngokuba negaraji epakishwe kwiigill, ngaphandle kokuba iphazamisa ukusebenza kwakho.
Igaraji encinci ayibonisi umtsalane kuphela, ikwathula nasengqondweni. Xa ubeka impahla yakho ezantsi ubuncinci obungenanto, ufuna indawo yokugcina encinci, kwaye unokwenza indawo yokugcina ukuze ihlangabezane neemfuno zakho.
Xa izinto zibonakala ngokucacileyo, kuthatha uloyiko ukuphuma ukuya kwigaraji ukuzama ukufumana into. Sebenzisa uyilo lwe-monochrome kunye nesitywina esine-gloss ekhonkrithi ephezulu yenza ukuba igaraji yakho izive ngathi iyinxalenye yendlu, kwaye ingaphantsi njengeshedi yangaphandle.
Nje ukuba wenze igaraji encinci, thabatha iifoto zelizwe eligqityiweyo. Ke, xa ubomi busenzeka kwaye iphinda iphazamiseke kwakhona, uya kuba nesalathiso sendlela yokulungisa izinto. Eyona nto ilunge kakhulu, kwixesha elizayo xa ungena kwigaraji yakho, awuzukuba naxhala malunga nokucinga kwabamelwane.
Ndwendwela eli phepha ngaphezulu Izimvo zokugcina igaraji .
Nksk. okanye mrs.
mangaphi amagumbi ehotele ekubhlokeni umtshato
kuthetha ntoni ukuphosakela inenekazi